ဖူးနုသဈ: Auto Roaming
Posted by ZT at 12:40 AM
ဒီတခါတော့ friefox နဲ့ဝင်ကြည့်ရင်း ဖတ်လို့ရသွားတယ်...
ဂြိုဟ်တုဖုန်း အဖမ်းခံရတတ်သည်။ တရားမ၀င်ပါ။
ဟုတ်ပမှန်ပ အောတိုအရွန်းကောင်းလို့ ခံရပြီးပြီ နောက်တော.စိတ်နာလို.မရွန်းတော.ဘူးစ်
မလေးရှားမှာ အဝင်က အထွက်ထက် ဈေးပိုကြီးတယ်။ မကိုင်ပဲ မစ်စ်ကောလ်လုပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပဲ ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။
ဂျပန်မှာ သုံးလို့ ရပါတယ် ကျနော့် MD Japan ပြန်တိုင်းဒီကနေကျနော်. mobile ကနေ ခေါ်တာပဲ SMS လည်းပို.တယ် စလုံး Mobile number ကိုဆက်တာပါပဲ သူဘယ်လိုချိတ်ထားတယ်တော့မသိဘူး
ရနျကုနျမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာ ညီလာခံ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ရွန်းမင်းပွင့်တယ်ဆိုတော့ ဘုရားမတာ ဖြစ်မယ်း)
ကျတော် ဖုန်းက အော်တိုရွန်းမီင်း ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတလောက ဟောင်ကောင်သွားတာ သူဟာသူ အော်တိုပွင့် ပီး ရွန်းမင်းခ တွေ ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာ.. သိပ်တော့မများပါဘူး...။ ဘာပဲပြောပြော ဆက်သွယ်လို့ ရတာပေါ့လေ။
I was there at yangon when auto roaming service was on. My colleague brought Malaysia mobile, and we enjoyed calling oversea then...
ဖတ်လို့မရဘူး ကိုဇက်တီရေ... ဘယ်စာလုံးကြည့်ကြည့် ဖွတ်ကျိ ဖွတ်ကျိလို့ရေးထားတယ်ပဲထင်နေတယ်... ဟီး..
ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရမှာ ပျင်းနေလို့ နက်ဖြန်မှပဲ ပြန်လာဖတ်တော့မယ်.. အဟဲ..
ဒီမှာတော့ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက ရိတ်လွန်းတာကြောင့် EU က တလောကပဲ လျှော့ချခိုင်းတယ်။ အမတော့ holiday ဆို ဖုန်းပိတ်ထားတယ်။ မဟုတ်ရင် အ၀င်ကို ကိုယ်က ပေးရတာ... ပြောတဲ့သူက သိနေတော့ မရပ်တော့ဘူး။
Pyei Soan said...
Hi Zaw Thet
You can have roaming service in Japan as long as your headset and sim card must be 3G.
I have tried before.